The Citizenship site Investment Board ga-atụle ngwa maka ịbụ nwa amaala na nsonaazụ ya nwere ike ịbụ inye, ịjụ ma ọ bụ igbu oge maka ihe kpatara ya, ngwa maka ụmụ amaala site na itinye ego.
Ogologo oge nhazi site na nnata nke ngwa maka ọkwa nke nsonaazụ bụ ọnwa atọ (3). Ebee, n'ọnọdụ ndị pụrụ iche, a na-atụ anya na oge nhazi ahụ ga-anọ karịa ọnwa atọ (3), a ga-agwa onye nyere ikike maka ihe kpatara igbu oge a na-atụ anya ya.
A ga-etinye akwụkwọ anamachọihe maka ịbụ nwaamaala site na itinye ego na kọmputa ma depụta ya n'aka onye ọrụ nyere ikike n'aha onye na-achọ ọrụ.
Akwụkwọ niile edere na ngwa ga-adị na Asụsụ Bekee ma ọ bụ nsụgharị ziri ezi na Asụsụ Bekee.
NB: Ntughari nke eziputara putara na ntughari nke onye okacha amara nke enyere n’aka ulo ikpe, ulo oru ochichi, ndi otu mba ozo ma obu ndi oru ochichi yiri ya, ma obu eme ya na mba ebe ndi na-achotaghi ndi nsughari nsụgharị nke ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọrụ ha ma ọ bụ azụmahịa ha na-emetụta nsụgharị ndị ọkachamara.
A ga-etinyerịrị akwụkwọ nkwado niile achọrọ na ngwa tupu ngalaba ahụ ahazie ha.
Ngwa niile ga-esonyere ya na nhazi a na-akwụghachi ụgwọ yana ụgwọ ọrụ siri ike maka onye isi akwụkwọ, nwunye ya na onye ọ bụla tozuru etozu.
Ebe enyere ikike maka ịbụ nwaamaala site na itinye ego, ngalaba ahụ ga-eme ka onye ọrụ ikike mara na a ga-akwụ ụgwọ itinye ego iji nweta ego wee chọọ nchịkwa gọọmentị tupu enyere Asambodo ụmụ amaala.
Ebe anabataghị ngwa ahụ, onye na-arịọ arịrịọ nwere ike, ederede, rịọ nyocha nke Mịnịsta.